चुलिँदो कटुता, गिर्दाे साख !
ओली–नेपाल पक्षका दोश्रो बरियताका नेताहरुले पार्टीभित्रको विवादलाई समाधान गर्ने भनेर पटक–पटक प्रयत्न गरेतापनि त्यसले सार्थक परिणाम ल्याउन भने सकिरहेको छैन ।
आइतवार, श्रावण ३१, २०७८ विमल थापा
गत मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलका वरिष्ठ नेता माधव नेपालप्रति कटाक्ष गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू मेरै पार्टीका केही मान्छेहरु पाउँला र खाउँला भनेर यहाँका पछि कुदेका छन् । तिनीहरुलाई मन्त्री दिनुस् न, किन बिलम्ब गर्नुभएको हो ? हिरिक्–हिरिक् गरिरहेका छन् विचराहरु मन्त्री खानका लागि । यति त गराइसक्नुभयो । पछिपछि हिड्या छन्, कुद्या छन् । फ्याँ–फ्याँ र स्वाँ–स्वाँ गरेका छन् । मन्त्री खान पाउ भन्या छन् । विहान बेलुकी चाकरीमा हाजिर भएका छन् । मन्त्री दिनुस् प्लिज । मेरो दलमा अलिकति घाटा भएपनि सहुँला–बुझुँला ।’
उनको यो अभिव्यक्तिले नेकपा एमालेभित्र चुलिएको विवाद मत्थर हुन सकिरहेको छैन भनी बुझ्न कठिन छैन । हुन त लामो समयदेखिको ओली–नेपालपक्षबीचको एकअर्काप्रतिको कटाक्ष मत्थर हुने संकेत अझैपनि देखिएको छैन । ओली–नेपाल पक्षका दोश्रो बरियताका नेताहरुले पार्टीभित्रको विवादलाई समाधान गर्ने भनेर पटक–पटक प्रयत्न गरेतापनि त्यसले सार्थक परिणाम ल्याउन भने सकिरहेको छैन । किनकी, ओली–नेपाल पक्षभित्र दोश्रो वरियताका नेताहरुको वैचारिक सुनुवाइ न त ओलीले, न त नेपालले नै कार्यान्वयन गर्ने मनसाय देखाउँदै आएका छन् । उनीहरु दुवैभित्रको एकअर्काप्रतिको कुण्ठा र राजनीतिक प्रतिशोध अझैपनि हावी भएको देखिन्छ । फलतः मिल्न–मिल्न खोज्ने तर जोडिन भने नसक्ने अवस्थामा ओली–नेपाल पुगेका छन् । अझै केही समय परिस्थिति अनुकूल हुने संकेत देखिएको छैन । जसका कारण एमाले दिनदिनै कमजोर मात्र बनेको छैन, उठ्नै नसक्ने गरी थिलथिलो हुने बाटोमा उन्मूख छ । पछिल्लो समयमा आफ्नो नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशबाट समेत राजनीतिक विरासत गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा पनि ओली–नेपालीबीचको हठले राम्रै काम गरेको देखिन्छ ।
संघमा दुईतिहाइ नजिकको बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेभित्रको विवाद चुलिँदै जाँदा सत्ताबाट बाहिनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । त्यसको पहिलो बाछिटा गण्डकी प्रदेशमा देखियो । आफ्नो नेतृत्वको सरकार एकाएक ढल्यो र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन हुनपुग्यो । त्यसैको अर्काे श्रृंखला लुम्बिनी प्रदेशमा समेत सिर्जना भएको छ ।
झापा आन्दोलनबाट उदाएका केपी ओली र माधव नेपालबीच झण्डै ४८ बर्ष लामो सम्बन्ध रहेको छ । २०४७ सालमा तत्कालिन नेकपा माले र माक्र्सवादी पार्टी एकिकरण भएर बनेको नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको जिप दुर्घटनामा निधन भएपछि ओली र नेपाल एउटै गाडी र जहाजमा समेत हिड्दैन थिए । उनीहरुमा पार्टीप्रतिको लगाव र माया यति धेरै थियो कि कहिलेकाहिँ सानोतिनो मनमुटाव भएपनि चाडै नै मिल्न पनि सक्दथे । तर केही समयदेखि भने उनीहरुबीचको सम्बन्ध यसरी बिग्रियो कि करिब–करिब नदीका दुई किनारा जस्तै भएको छ ओली–नेपालको सम्बन्ध ।
नेकपा हुँदा प्रचण्डको साथ र समर्थनमा ओलीमाथि गरिएको कारबाही र एमाले ब्यूँतिएपछि नेपाल माथि ओलीले चलाएका डण्डा र व्यवहारले उनीहरु अहिले राजनीतिक रुपमै पनि पानी बाराबारको अवस्थामा पुग्न लागे देखिन्छ । तीन बर्ष अगाडि २०७६ भदौ ५ गते ओली आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको क्रममा सिंगापुर जाने क्रममा ओली र नेपालबीच भनाभन नै चलेको थियो । त्यसक्रममा ओलीले आफू मरोस् भन्ने चाहेको जस्तो गम्भीर आरोप समेत लगाएका थिए । त्यतिखेर विदेश जानुपूर्व पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले सचिवालय बैठकमा आफू सिंगापुर जाँदा आफ्नो अनुपस्थितिमा आफ्नो सहमतिमा पार्टीले निर्णय लिन सक्ने बताएका थिए । तर माधव नेपालले त्यसको प्रतिवाद गरेपछि ओली–नेपालबीच चर्काचर्की परेको थियो । त्यही क्रममा ओलीलाई नेपालले स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दापनि ओलीले लिन अस्वीकार गरेका थिए । पार्टीभित्र ओली र नेपालबीचको मनमुटाब सोही बेलादेखि स्पष्ट रुपमा देखा परेको थियो ।
सानैमा आमा गुमाएका ओली बाल्यकालमा झापाका कम्युनिष्ट नेता रामनाथ दाहालको आश्रयमा हुर्किएका थिए । दाहालकै प्रेरणाबाट कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेका ओली २०४४ सालमा १४ बर्षसम्म जेल जीवन बिताएका थिए । ओली र नेपालको राजनीतिक स्कूलिङ्ग पनि भिन्न छ । परिवारको संरक्षणमा हुर्किएका र राजनीतिमा आउनुपूर्व बैंकको जागिरे जीवन समेत बिताएका नेपाल राजनीतिमा चासो राख्ने व्यक्ति थिए ।
करिब १५ बर्ष पार्टीको महासचिवका रुपमा नेतृत्वमा रहेका नेपालको पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा ओलीसँगै चल्दै आयो । २०५६ सालको संसदीय चुनाव र सातौं महाधिवेशनका बेलामा पनि ओली–नेपालबीचमा अन्तरविरोध देखिएको थियो । त्यतिबेला पार्टीका महासचिव नेपाल भएका बेला दलको नेता ओली बन्न चाहेका थिए । तर त्यसो हुन नेपालले दिएनन् । त्यहीबेला देखि ओलीले पार्टीभित्र आफ्नो छुट्टै गुट बनाउँदै शक्तिमा ल्याउने प्रयास थालेका हुन् । २०७० को संसदीय दलको चुनावमा यी दुई नेताबीचको तिक्तता झनै बाहिर आयो । पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा ओलीको काँध थापेका नेपालले दलको चुनावमा भने तत्कालिन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई साथ दिए । तर पनि उक्त चुनावमा ओलीले नै बाजी मारेका थिए । दलका अध्यक्षलाई पराजित गरेर संसदीय दलका नेताका रुपमा चुनिएर ओलीले पार्टीमा विगतको परम्परालाई मात्र तोडेनन्, पार्टीभित्रको शक्ति संरचनामा समेत फेरबदल ल्याउन सफल भए । यतिमात्र होइन, २०७१ सालमा एमालेको नवौं महाधिवेशनमा माधव नेपालाई करिब ४३ मतले पराजित नेपाल र ओलीबीचको सम्बन्धमा ठूलै तिक्तता आएको छ ।
२०७५ जेठ २ गते तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच औपचारिक रुपमा पार्टी एकिकरण हुँदा नेपालको वरियताक्रम तल झरेको थियो । त्यतिखेर पार्टी एकिकरणबाट खासै सन्तुष्ट नभएका नेपाल र चीनमा रहेका झलनाथ खनालले समेत पार्टीमा आफ्ना वरियाक्रममाथि ओलीले सिधैं हस्तक्षेप गरेको महसुस गरेका थिए । उनीहरुले पार्टी एकिकरणको खुलेरै विरोध नगरेपनि पार्टीभित्र प्रचण्ड लगायतका नेताहरुको प्रवेशले आफ्नो स्पेस खुम्चिएको महसुस भने गरेका थिए । पार्टी एकिकरण भएपछि दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएअनुरुप ओली र प्रचण्ड हावी हुँदा नेपाल र खनालको भूमिका खुम्चिनु स्वभाविक नै थियो । जब पार्टी र सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारीका बिषयमा ओली र प्रचण्डबीच मनमुटाव हुन थाल्यो, तब प्रचण्ड र नेपाल एउटा कित्तामा उभिन पुगे । यसबीचमा प्रचण्डको पार्टी नेतृत्वमा आफ्नो कब्जा जमाउने सपना र पार्टीमा कमजोर स्पेसलाई सामना गरिरहेका नेपालबीच तब झनै कसिलो सम्बन्ध बन्न पुग्यो, जब दोश्रोपटक मिग्रौला प्रत्यारोपण गरेर ओली पूर्ण रुपमा सशक्त भएर पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा हावी हुन थाले । २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वाेच्चको फैसलापछि नेकपा एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा पुगेपछि प्रचण्डले नेपाललाई झनै आफ्नो समिप्यतामा ल्याएका देखिन्छ । प्रचण्डले आफ्नो पार्टीमै नभएपनि नेपाललाई आफ्नै सहयोद्धाको जसरी व्यवहार गरी नेकपा एमालेभित्रकै अर्काे गुटलाई बल दिन हौस्याएका देखिन्छ । जुन राजनीतिक रुपमा नेकपा एमालेलाई सोझै घाटा भएपनि प्रचण्डका लागि पनि फाइदा नै पुगेको देखिन्छ ।
ओली र नेपालबीच लामो समयदेखिको तिक्ततापूर्ण अवस्थालाई सर्वाेच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले झनै उचाइमा पु¥यादिएको छ । खासगरी ओली पक्ष नेपालका पछिल्लो गतिविधिबाट रुष्ट मात्र छैन । कुनैपनि हालतमा नेपाल पक्षको पार्टीमा हावी नहोस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्न थालेका छन् । तर नेपाल पनि ओली पक्षको एकपक्षीय निर्णय अनि आफ्ना सहयोद्धालाई पेलेर जाने नीतिबाट चिडिएका छन् । उनीहरुको बटम लाइन भने पार्टी एकिकरण पूर्व २०७५ जेठ २ गते जुन केन्द्रीय कमिटी थियो, त्यसको पूर्ण बैठक बसेर अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने रहेको छ । त्यसका साथै फागुन २८ र तत्पश्चात् भएका कथित बैठक र तिनका अवैध निर्णय सबै रद्द गरिनुपर्ने उनीहरुको स्पष्ट माग दाबी छ । त्यसको साथै ओलीले कुनैपनि हालतमा आफूहरुलाई एमालेमा रहन नदिन विभिन्न दाउपेच गरेको आरोप समेत नेपाल–खनाल पक्षले लगाएको छ ।
अदालतको फैसलाबाट तीन वर्षदेखि जारी एकीकृत पार्टी निर्माणको एउटा प्रयास बीचैमा टुंगिएको उल्लेख गर्दै ओलीले त्यसअघि नै पार्टीमा समस्या उत्पन्न भइसकेको दाबी गरेका छन् ।
ओलीले प्रचण्डको अवसरवादी र अस्थिर भूमिकाको कारण त्यो एकता असफल भएको आरोप लगाएका छन् । ‘पछाडि फर्केर हेर्दा एउटा असल उद्देश्य र मनशायका साथ सुरु गरिएको पार्टी एकीकरण मूलतः सके कब्जा गर्ने नभए पार्टी विभाजन गर्ने प्रचण्डको अवसरवादी, विखण्डनकारी र अस्थिर भूमिकाका कारण असफल हुन पुगेको बताउँदै आएका छन् । ओलीले माधव नेपाल लगायतका नेताहरु पनि पार्टी विभाजनको कारक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
ओली पक्षले पार्टी एकिकरणको ढोका खुलै राखेको भनेतापनि नेपाल–खनाल पक्षलाई सहजै पार्टीमा अवतरण गर्ने बाटो भने लगभग बन्द गरिदिएका छन् । यो अवस्थामा नेपाल–खनाल पक्षलाई नखाऊ भने ‘दिनभरिको शिकार, खाउ भने कान्छो बाउको अनुहार’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै भएको छ ।
नेकपा एमालेभित्र ओली र नेपालबीचको मनमुटाव चुलिँदै गएको छ । तर यसले एमालेका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई चिन्तित मात्र बनाएको छैन, दुवैको राजनीतिक उचाई पनि घर्किंदै गएको छ । आन्तरिक गुटबन्दीमा ओली र नेपालबीचको रस्साकसीले पार्टीलाई कसिलो र मजबूद होइन, बरु शिथिल र थिलथिलो बनाउँदै लगेको छ । जहाँ एमाले इतरका राजनीतिक शक्तिहरुले नराम्ररीले कत्थक नृत्य गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहेका छन् । यसबाट ओली र नेपालको राजनीतिक साख चुलिँएको छैन, बरु दिनदिनै घट्दो क्रममा छ ।
- थापा क्यापिटल दैनिकका प्रधान सम्पादक हुन् ।
प्रकाशित मिति: आइतवार, श्रावण ३१, २०७८, ०४:२२:०५